Vidio ny Fifanarahana fonosana YouTube - YTpals
Fifanarahana fampiroboroboana horonantsary
Fifanarahana momba ny fonosana amin'ny alalàn'ny fantsona sy horonan-tsary
Fonosana 1000 Views
100 Mizara $ 10
Atolotra amin'ny horonan-tsary 1 farafaharatsiny ny serivisy.
Fonosana 2000 Views
Azo zaraina eo anelanelan'ny horonantsary 1-2 farafaharatsiny ny serivisy.
Fonosana 3000 Views
Azo zaraina eo anelanelan'ny horonantsary 1-3 farafaharatsiny ny serivisy.
Fonosana 4000 Views
Azo zaraina eo anelanelan'ny horonantsary 1-4 farafaharatsiny ny serivisy.
Fonosana 5000 Views
Azo zaraina eo anelanelan'ny horonantsary 1-5 farafaharatsiny ny serivisy.
Fonosana 10000 Views
Azo zaraina eo anelanelan'ny horonantsary 1-10 farafaharatsiny ny serivisy.
Fonosana fanatsarana ny fantsona
Fanombanana 1 Channel $ 120
Famolavolana Banner 1 Channel $ 60
Famolavolana Thumbnail momba ny haino aman-jery 1 $ 25
Manolotra ity serivisy ity amin'ny fantsona 1 izahay.
Kitapo fanatsarana horonantsary 6
Fanombanana amin'ny horonan-tsary 6 $ 150
Famolavolana Thumbnail Video 6 $ 130
Manolotra ireo serivisy ireo amin'ny horonan-tsary 6 izahay
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fividianana fifanarahana fonosana?
Ny fifampiraharahana fonosana dia natao hanambatra ny serivisy rehetra tokony hividiananao miaraka amin'ny valiny tsara indrindra sy amin'ny vidiny mihena.
Ohatra, fa tsy mividy fomba fijery 5,000 fotsiny, dia hahazo ny laharana tsara indrindra sy ny valiny hita voajanahary rehefa mividy tiako 400, fizarana 2000 ary hevitra 40.
Atambatra ny serivisy marina mba hanome anao valiny tsara indrindra.
Inona ny fifanarahana fonosana malaza indrindra?
Ny fifanarahana fonosana malaza indrindra dia ny “5000 Views Package.” Azo aparitaka amin'ny horonan-tsary 1 ka hatramin'ny 5 farafaharatsiny izany.
Na izany aza, ny fonosana izay anoloranay fatratra ny tsirairay hividianana dia ao amin'ny "Fifanarahana fonosana amin'ny fampivoarana ny fantsona sy horonantsary" ary antsoina hoe "fonosana fanatsarana ny fantsona"
Raha tena matotra amin'ny fahombiazanao amin'ny YouTube ianao, dia handray fandrosoana lehibe amin'ny famelana anay hanombatombana ny fantsonao, hilaza aminao izay tena ilainao hanova ary hanome anao sary matihanina hanome ny fantsonao izay fisehoana "YouTuber bigtime".
Manolotra fifanarahana fonosana hafa ve ianao?
Afaka manomana fifanarahana fonosana manokana izahay. Raha te hampifangaro sy hifanaraka amin'ny serivisy hafa ianao, na hampitombo ny isan'ny serivisy sasany, mifandraisa aminay fotsiny ary ampahafantaro anay ny serivisy sy ny habetsaky ny serivisy tianao hampifangaroanao. Hanome anao tolotra manokana izahay.